प्रश्नोत्तरमा पवन चामलिङ- आरोप छ एसकेएम रोबिनहूड तालमा सत्ता हाँक्दैछ – Sikkim Journal
प्रश्न – एसकेएम सरकारले आफ्ना समर्थकहरूलाई नयाँ-नयाँ गाड़ी दिने योजना शुरू गरेको छ। यस्तो योजना एसडीएफ-को पालामा भएजस्तो लाग्दैन। यस किसिमको मुफतको दानबारे तपाईंको धारणा के छ?
एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिङ (फाइल फोटो)
उत्तर – कुशासन र बेइमानीको योभन्दा ठूलो अर्को उदाहरण मुश्किलैले पाउन सकिएला। सरकारले गरीबपक्षीय, युवापक्षीय र जनपक्षीय कार्यक्रमहरू अघि ल्याएर जनतालाई सहयोग गर्नुको साटो एसकेएम-ले आफ्नै समर्थकहरूलाई पैसा र गाड़ीहरू वितरण गरिरहेको छ र युवाशक्तिको सिर्जनशक्तिलाई विनष्ट गर्ने काम गरिरहेको छ। यो एसकेएम-को रोबिनहूड ताल हो। फरक यति नै छ कि वास्तविक रोबिन हूडले धनीहरूलाई लुटेर गरीबलाई सम्पत्ति बाँड़्थ्यो, तर सिक्किमे रोबिन हूडले चैं सिक्किमलाई नै लुटेर लुटको धन आफ्नै टीमलाई बाँड़्दैछ। सरकारले यसलाई ‘युवा विकास कोश’ -अन्तर्गत गरिएको कार्यक्रम भनेर बताए पनि यस किसिमको कुनै कोशको उल्लेख एसकेएम-को कुनै बजट खातामा छैन। प्लान बजटमा पनि छैन, नन-प्लान बजटमा पनि छैन। यसले प्रमाणित गर्छ, यो रकम लुट र सिक्किम बिक्रीबाट आर्जन गरिएको भ्रष्टाचारको पैसा हो। यदि त्यसो होइन भने यत्रो धेरै पैसा कहाँबाट आउँदैछ? त्यसको हर-हिसाब एसकेएम सरकारले सिक्किमे जनतालाई दिनुपर्छ।
एसकेएम-को नेतृत्वमा सिक्किममा जे भइरहेको छ, त्यो देखेर म हैरान छु। कोरोनाको बेला माछामेला, साइकल मेला गरेपछि आज पनि उनीहरूले सिक्किममा थरी-थरीको मेला गरिरहेका छन्।
क. जनताको अस्मिता लिलाम मेला – उनीहरूको पार्टी जोइन् गरे काम-धन्धा, बिल, पेन्सन, भत्ता, एम. आर., एडहक नोकरी, वान फ्यामिली वान जब्, सरकारी सहुलियतहरू दिने, नभए यी सहुलियतहरू काटिदिने डर-धम्की दिँदै जबर्जस्ती जनतालाई पार्टीमा सामेल गर्ने पार्टी भर्ती मेला एसकेएम-ले आज चलाइरहेको छ।
ख. सिक्किम किनबेच मेला (एस.के.एम. मेला) – एसकेएम सरकारले सिक्किमबाहिरका व्यापारीहरूसँग मिलेर सिक्किम बेच्ने काम गर्दैछ। संविधानको धारा 371एफ अनुसार सिक्किमको पुरानो कम्पनी कानून सुरक्षित रहेकोले 30 जनवरी, 2019 -देखि सारा देशभरि सेन्ट्रल कम्पनीज एक्ट, 2013 लागू हुँदा पनि सिक्किममा त्यो कानून लागू भएको थिएन। तर एसकेएम सरकारले हतार हतार केन्द्रको कम्पनी एक्ट सिक्किममा लागू गरेर बाहिरका मानिसहरूको कम्पनी रेजिस्टर गर्ने र ती बाहिरका कम्पनीहरूलाई सिक्किमका सम्पतिहरू किन्ने छूट दिएको छ।
ग. रोबिन हूड मेला – पी.एस. गोले टीमका सदस्यहरूले कर्मचारीहरूको पोस्टिङ-ट्रान्सफरमा पैसा खाएर, प्रोमोसनमा पैसा खाएर, सप्लाईमा पैसा उठाएर, टेन्डर नगरी ठेका दिलाएर, जनताको योजनाहरूलाई लागू नगरेर भ्रष्टाचारको पैसा थुपार्दैछन् र आफ्नो लागि घर-फ्ल्याट, जग्गा-जमीन र महंगा महंगा गाड़ीहरू किन्ने कामहरू गर्दैछन्। यसै वर्ष मात्र एसकेएम-ले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, एमएलएका भाइ-भतिजाहरूलाई 700 वटा गाड़ी बाँड्यो। आम जनतालाई हात-मुख जोर्न धौधौ परिरहेको बेला एसकेएम नेताहरू लूटको सम्पत्तिमा मोज-मस्ती गरिरहेका छन्। डर-धम्की देखाएर, नभए लोभ-लालचमा फँसाएर जनताको आवाजलाई थुन्ने काम खुलेआम भइरहेका छन्। गएको तिहारमा पनि मुख्यमन्त्रीले प्रत्येक देउसी-भैलो ग्रुपलाई2लाखदेखि5लाख रुपियाँ बाँड़े। यत्रो पैसा कहाँबाट आउँदैछ? कसको पैसा हो यो?
अहिलेको घड़ीमा सिक्किमको ध्यान शिक्षा क्षेत्रलाई दह्रिलो बनाउने, युवाहरूलाई नोकरी-चाकरी दिने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, जन-पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, उद्यमीहरूको लागि अवसरहरू सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई बलियो बनाउने, जनताको घर-दैलोमा लोक कल्याणकारी योजना र सहुलियतहरू पुऱ्याउने, अर्ग्यानिक मिशन अनि हरित अर्थतन्त्रलाई बढ़ावा दिने आदि कामतिर हुनुपर्ने हो। स्कूल-कलेजहरूको स्थिति एकदमै खराब भएको छ। सरकारी स्कूलहरूमा क्लर्क र नाइट गार्डहरूले नानीहरू पढ़ाउनुपर्दैछ। शिक्षकहरूको अभूतपूर्व कमी भएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा बुनियादी उपचारको लागि जनताले आफै पैसा तिर्नुपर्दैछ। अस्पतालमा दवाई-पानी छैन। मानिसहरूले मेडिकल ग्रान्ट पाएका छैनन्। बृद्धावस्था भत्ता पाएका छैनन्। सुत्केरी भत्ता पाएका छैनन्। पुराना निर्माण र भत्केका बाटाहरू बनाउने कामलाई फण्ड नभएको भनेर त्यत्तिकै छोड़िएका छन्। उद्यमीहरू आफ्ना उद्यमहरू बन्द गर्न बाध्य छन्। सर-सफाई र ढल-निकासी व्यवस्था पूर्णतः अस्त-व्यस्त भएको छ। सरकार यी सबै मुद्दाहरूप्रति आँखा बन्द गरेर बसिरहेको छ। समग्रमा सारा सिक्किमेहरू झनभन्दा झन् गरीब बन्दै गइरहेका छन् र केही जना मानिसहरू झनझन् धनी हुँदै गइरहेका छन्।
आज केवल मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका वरपरका दुइचार जना मानिसहरू खुशी छन्, अनि मुख्यमन्त्रीका बिजिनेस पार्टनर मित्तलहरू खुशी छन्। किनभने अहिले सिक्किम सरकार उनीहरूकै भएको छ, सिक्किम सरकार उनीहरूकै पेवा भएको छ। आज सिक्किमेहरूको सामुहिक भविष्य दाउमा लागेको छ। यसले सिक्किमको सर्वस्वहरण गरिरहेको छ।
महामन्दी(ग्रेट डिप्रेसन)-को समय अमेरिकामा मानिसहरू आत्महत्या गर्न बाध्य थिए। धेरै मानिसहरूले आफ्नै घरको खिड़्कीबाट हाम फालेर प्राण त्यागे। देशमा नोकरी थिएन, खाद्यान्न थिएन। मानिसहरू भोकभोकै थिए। त्यस्तो समयमा अचानक शिकागोका हज्जारौं बेकार युवाहरूले बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीन छाक फोकटको खाना पाउनथाले। पछिबाट थाहा लाग्यो, त्यो खानाको व्यवस्था एल कपोन नामक अमेरिकाका कुख्यात लुटेराले गरेका थिए। यिनी तत्कालिन अमेरिकाका सबैभन्दा ठूला अपराधी र डाका थिए, जसले लुटपाट, घूस अनि हत्याको माध्यमबाट अकुत सम्पत्ति कमाएका थिए। उनले त्यही पैसा खर्च गरेर भोका तथा बेरोजगार मानिसहरूलाई खाना खुवाइरहेका थिए। दैनिक अखबार बिस्मार्क ट्रिब्युन लेखेको छ, ‘भात एल कपोनले खुवाउँदैछ कि कुनै सज्जनले, भोका मान्छेलाई के फरक पर्छ? उसको जरूरत त खाना हो!’ मान्छेहरूको बेरोजगारी, भोक र समस्याको फायदा उठाएर एल कपोनले उनीहरूको समर्थन हासिल गर्न यो काम गरिरहेका थिए। एकजना कविले लेखे, ‘एल कपोनले एउटा हातले खाना खुवाउँछ, र अर्को हातले मार्छ।’
आज सिक्किममा ठीक्क त्यही हालत छ। गाड़ी, पैसा, देउसी-भैलोलाई दानको रूपमा जुन पैसा बाँड़िन्दैछ, त्यो सबै सिक्किम लुटेर, सिक्किमको भविष्य बेचेर कमाएको पैसा हो। जब समाज र अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ, सबै कुरो एल कपोनहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ।
म फेरि पनि सिक्किमे जनतालाई सतर्क गराउनचाहन्छु कि आज सिक्किममा भइरहेको आर्थिक अपव्यवस्थाले सिक्किमको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुऱ्याइदिनेछ, र सिक्किमलाई भारतको भेनेजुएला बनाउनसक्ने प्रबल सम्भावना छ। यो दिन सारै टाढ़ो छैन। सिक्किमको अर्थनीति यसप्रकारले तहस-नहस हुँदैजाँदैछ कि एकदिन सिक्किमेहरू तिनै व्यापारीहरूको भिक्षामा बाँच्नुपर्ने दिन आउनेछ, जसले आज सिक्किमका सम्पत्तिहरू खरीद गर्दैछन्! यी धनी व्यापारीहरू मुख्यमन्त्रीका टीममा छन्। उनीहरूले अघिबाटै हाम्रो राज्यको नीति निर्माण, हाम्रो बजट, अर्थनीति र भविष्यमा प्रभाव पार्न थालिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री उनीहरूका कठपुतली बनिसकेका छन् र हामी मूकदर्शक बनेर यी सबै कुरा हेरिरहेका छौं। नाटक अघि नै शुरू भइसकेको छ, र यसको क्लाइमेक्स अब चाँड़ै देख्न पाइनेछ।